Site driverless ụgbọala jetpacks - News Ọchịchị
Site driverless ụgbọala jetpacks
Isiokwu a na-akpọ “Site driverless ụgbọala jetpacks: izute tech innovators reshaping n'ụzọ” e dere site Andy Dị Umeala n'Obi, maka theguardian.com on Saturday 14 November 2015 14.13 UTC
New Zealand dabeere Martin Aircraft Company si flagship ngwaahịa bụ ihe unconventional efe efe igwe: a jetpack nke nwere ike iyi ka a prop si a Sci-Fi nkiri, ma ọ bụghị eziokwu na ọ bụ nke ọma n'ụzọ na-eduga commercialization.
Na October, New Zealand si Civil Aviation ikike sụrụ ụlọ ọrụ ahụ si prototype 12 model jetpack maka manned flights. Onye ofufe-propelled jetpack, mgbe e gosiri na June na Paris Air Gosi, nwere ike efegharị fọrọ nke nta 1,000 mita na ofufe ruo ọkara otu awa. The ụlọ ọrụ jetpacks na-atụ anya ịghọ maka azụmahịa ndusụk ini ke nkera nke abụọ nke 2016.
The jetpack mmepe bụ otu ihe atụ nke nnukwu echiche na nnukwu nzo a mere gafee njem-okowụk ụlọ ọrụ, ebe ụlọ ọrụ dị ka Martin Aircraft na-racing ka anya n'ọnụ nke ihe bụ omume. Anyị na-ebi na kpọdara akpọda nke a mgbe ụgbọala ga-abụ "n'ụzọ zuru ezu kwurula ke ogologo okwu", dị ka na naa CEO Ilọn Musk. Na oku na electric ụgbọala oke n'akụ a ọnwa, o nyere ya 15 ka 20 afọ.
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ njem oru buu igba n'ulo na N'otu aka ahụ echepụtakarị atụmatụ nke ha onwe ha, si spaceships na-eme ka suborbital flights ka aircrafts na-eyipụ na ala ekwesị.
The Guardian eruwo n'ebe a ole na ole n'ime ndị a ihe ọhụrụ ga-esi a echiche nke ebe ga-eme n'ọdịnihu nke njem na-gawa. Anyị jụrụ ya otú ha na-agwa okwu bụ pụta ụwa oru ịma aka na ihe mere ha kpebiri iji nweta n'ime nke a ohere na akpa ebe. Ihe anyị hụrụ dị ike nchekwube n'ihi na a n'ọdịnihu dị nso ebe strapping on a jetpack nwere ike ịbụ ka nkịtị dị ka na-akwọ ụgbọala ka.
Martin Aircraft ezube ẹkedori ya jetpack na nkera nke abụọ nke na-esote afọ. Ụlọ ọrụ nyere Guardian na nke a ngosipụta video.
Martin Aircraft CEO Peter Coker maara ya ahịa pụrụ iyi ka a rụrụ a nwee gaghị eme ọhụụ.
"Ọ bụ m bụ nwa mekwara m ka m soro na ụlọ ọrụ,"Coker kwuru, N'agbanyeghị ihe ịma aka. "Anyị bụ ndị na ezumike, na nwa m nwoke, na-arụ ọrụ maka a boutique ego ụlọ ọrụ na London, n'ụzọ ziri ezi pụta ìhè: 'Gịnịdị mere na ị chọrọ itinye aka na nnukwu mgbanwe ụgbọelu na narị afọ gara aga?' "
Na a ọsọ ọsọ iji nweta ha jetpacks ka ahịa, 2015 e ihe nke a akọwapụta afọ maka ụlọ ọrụ, nke nwere na-adịbeghị anya ọnwa e kpochidoro elu nkwekọrịta, mmekọrịta na igosi imewe ka nwere ahịa. Ọ amụbawo 53 ndị mmadụ gafee 13 mba na-edepụtara na Hong Kong ngwaahịa mgbanwe.
-Akọwa ọdịnihu nke jetpacks, Coker envisions a "okporo ụzọ nke elu-igwe" ma ọ bụ a "-anọ akụkụ nke iga", ebe nkezi na mmadụ nwere ike ngwa ngwa-aga njem site otu isi ọzọ.
"Anyị ngwa ngwa ghọtara na ịba uru gburugburu ihe dị ka nke a dị ukwuu karịa ịbụ naanị a onye jetpack,"Kwuru Coker, a bụbu Lockheed Martin Executive. "Anyị na-ahụkwa ohere ke azụmahịa oru - n'ihi na mmanụ na gas, Ngwuputa na ugbo. "
Echiche nke a na-efe efe jetpack ike ụda dị ka a ike ere ka dubious investors na ma eleghị anya a akwa kwa anya maka nwere mmekọ na ndị ahịa. Ma Coker-ekwu nnọọ na-ahụ ihe nwere ike inyere clinch a ire ere. Mgbe ụlọ ọrụ ya na-egosi a picture ma ọ bụ video nke echiche ma ọ bụ ọnọde a prototype ke edinam, Coker-ekwu na ọ "ozugbo akpali na nrọ m mgbe m bụ nwa ewu". N'ụzọ ụfọdụ, ọ na-ekwu, na-na Buy-na bụ mfe akụkụ.
Ọ na-emekwa adịchaghị mgbagwoju anya karịa surmounting pụta ụwa oru ịma aka ndị na-abịa na-ewu a usoro na-agụnye a gas engine na abụọ Fans na-enye ndị dị mkpa inwego.
"Mgbe ị na-ndị mmadụ site na nkà ihe ọmụma nke otú ọ na-arụ ọrụ - dị ka ọma niile innovations, ọ bụ a mgbagwoju anya nnyefe na anya mfe - ha nweta ya,"Coker-ekwu. "Ha ga-esi na ịba uru nke ya, na oge ọ bụla anyị na-aga na-ewetara ya ebe, onye na-abịa na ụfọdụ dị iche iche n'ụzọ iji ya. "
The Next echiche na-agụnye kwurula pods na ịgwa onye ọ bụla ọzọ. Industrial mmebe Tommaso Gecchelin nyere Guardian na nke a nsụgharị.
Transportation innovations dị ka jetpacks-na-ewere on a dịgasị iche iche nke ụdị ndị ọzọ - ụfọdụ incremental, ụfọdụ groundbreaking.
Driverless ụgbọ ala technology bụ otu n'ime kacha ekpo ọkụ ugbu ndi n'oge, na-emepụta site Ford ka Mercedes-Benz eme driverless tech ejije. Sensọ na assistive ike ndị di kwa n'etiti ndi themes nke Intelligent Transportation Society of America si Rethinking Transportation maka Next 30 Afọ elu ugwu na October na Washington DC.
The push n'ebe obodo kwụụrụ bụ isi ihe nke ọtụtụ ugbu a njem breakthroughs. Na na naa nke atọ nkeji iri na ise onyenwereoke akwụkwọ ozi tọhapụrụ 3 November, ụlọ ọrụ dere na, "Anyị ahịa chupu ha ụgbọala fọrọ nke nta 250m kilomita a nkeji iri na ise, n'ihi na a ngụkọta nke fọrọ nke nta 1.5bn kilomita ka ụbọchị. "naa, akwụkwọ ozi ahụ na-aga, na-atụ anya ụbọchị 'mgbe anyị nwere ike ịgwa gị otú nnọọ anyị ụgbọala chugaworo ahịa anyị ".
Ọdịnihu dị otú ahụ bụ a foregone mechie Italian engineer na ulo oru mmebe Tommaso Gecchelin. Ọ na-sketched si a modular echiche ọ na-akpọ Osote nke na-egosi ihe bukwa nnoo electric pods ndị nwere ike ime ma kwụpụ na ndị ọzọ pods dị ka mkpa, dị ka ụfọdụ futuristic ụgbọ okporo ígwè na ike ịmalite obere na-eto mụbaa, accordion-style.
"Dabere na anyị technology na onye ọrụ kwesịrị ọnọdụ analysis … ọ bụ nnọọ ike ịbụ na n'ọdịnihu, anyị ga-ahụ a revolutionary segmentation nke njem ahịa,"Gecchelin-ekwu. "On otu akụkụ, mmadụ na-akwagharị ụgbọala ga-adị ka inyinya na biakwa obibia nke motorized ụgbọala. Otú ahụ ka egwuregwu ụgbọ ala ga-aghọ ndị a ma ama, mgbe obodo ụgbọala ga-aghọ obere chọrọ, enye ndị ọzọ ohere ka nwere ọgụgụ isi na usoro ime njem nke ga-enye a ọzọ bara uru na imezu … njem na n'ụzọ n'ahụmahụ. "
Ọ envisions ya ọzọ echiche ka ihe karịrị nanị a COMMUTER nlereanya. Ọ pụrụ okpukpu abụọ dị ka a ọrụ nnyefe usoro, na ulo oru renting ma ọ bụ owning pods nke ha onwe ha na-eziga ha kwajuru na ngwongwo a ahịa si n'ụlọ.
Gecchelin-ekwu na ọ malitere iche echiche banyere ihe ngwọta ndị dabeere gburugburu "ọrụ, ntụrụndụ na na-ina ọrụ [kama] okporo ụzọ njikarịcha ". Ugbu a, ọ na-achọ ego na-ekwe ka imewe nke a mbụ nsoro na-egosi na echiche ke ata ụwa. Ọ na-ugbu a nta na ole na ole German obodo banyere nwere mmekọrịta.
"Nke a bụ ihe robotics na onwe ịnya ụgbọ ala teknụzụ ga-eduga,"Ọ na-ekwu. "Ọgụgụ isi na onwe ịnya ụgbọ ala Ị kpọghee ekwt-ekwe omume n'ihi ugbo ala imekota kpọmkwem dị ka ọ na-eme na Ọzọ."
Ndị ọzọ karịa oru nsogbu, otu n'ime ndị kasị ihe mgbochi na-eguzo n'ụzọ ndị dị otú innovations bụ ọnọdụ ghar. Fọrọ nke nta 17m ọhụrụ ugbo ala ga-eresị na see okporo ụzọ na US afọ a - ugbo ala na ga-adịghị anya a gbahapụ maka a radikal ụzọ ọhụrụ nke na-esi n'otu ebe gaa n'ọzọ.
Elio Motors na-arụ ọrụ ka mma na ụgbọ ala na a atọ-wheeled, ọgba tum tum-dị ka echiche. The ụlọ ọrụ nyere ndị Guardian na a nkwado video.
Ná mgbalị innovate kwekọrọ na mbụ, Paul Elio okpokolo agba mmekọ nke ụlọ ọrụ ya si flagship ụgbọala ihe dị ka ndị iPad. N'otu ụzọ mbadamba adịghị pụtara ịbụ a PC egbu egbu ma kama complements ọrụ 'ẹdude nso nke ngwaọrụ, Elio-ahụ ya ụlọ ọrụ ụgbọala dị ka ihe yiri iPad nke a ahịa si arụzi ụgbọala. Phoenix dabeere Elio Motors na-ewere iwu now n'ihi na ya atọ-wheeled, ọgba tum tum-dị ka ụgbọala na-akawanye 84 kilomita aka dị lita na nke ọ na-ezube hapụ n'afọ ọzọ na ihe oké ọnụ $6,800 mmado ọnụahịa.
"Echere m na ihe dị ka nke a nwere na-eme,"Na-ekwu Elio, onye ụlọ ọrụ ugbua nwere ihe karịrị 47,000 abụọ n'ihi na ya ụgbọala. "M bi na New York City ruo ihe a afọ na ọkara, na m hụrụ n'anya na ụzọ ụgbọ oloko usoro e. Mgbe i nwere na size bi, uka n'ụzọ ọrụ.
"N'ihi na ndị ọzọ nke mba, anyị doro anya ma mkpa ibibi niile na ala ịta ahịhịa na ike nnukwu bi ebe ma ọ bụ chepụta a ọzọ oru oma ụzọ na site na ala ịta ahịhịa ndị downtowns ebe anyị na-arụ ọrụ. "
Elio si prototype ngwaahịa a nyochawa nkewa dị ka a ọgba tum tum, ma ya abịa na eji enyere ndụ aka dị ka ike windows, ntụ oyi, Akpa ikuku na ike mkpọchi ụzọ, niile na ihe nchọ ahu. The ugbo ala ga-emepụta site Elio na Shreveport, Louisiana, na a mbụ General Motors mmepụta eweta.
"Ọ na-wee na-ala-eri na elu-agbara - na ọ na-nwetara ịbụ ma nke ndị na-arụ ọrụ,"Ọ na-ekwu. "Nke a bụ ihe 'na' oke, ọ bụghị ihe 'ma ọ bụ' oke. N'ihi ya, echiche bụ ịzụtara nnukwu ụgbọala n'ihi na ihe mere na ị zụta ya, na i nwere otu Elio kwa. Ị na ụgbọala ndị Elio-arụ ọrụ, na Saturday ị na-gị SUV. "
Elio kwuru na ya kpebiri ẹkedori ụlọ ọrụ ya na-ewu ya onwe ya pụrụ iche ụgbọala mgbe ndụ site na akụ na ụba ujo nke 2008 - Na mgbakwunye na ya kweere na dealership dabeere ụgbọala azụmahịa bụ otu n'ime "gamesmanship" na akụnụba na-adịghị na onye ahụ si amara. Otu n'ime ihe ndị o ngwa ngwa mụtara ka o setịpụrụ banyere launching Elio Motors bụ na ihe ole na ole dị ka fraught ike maka ihe entrepreneur dị ka na-agbalị na-amalite a ụgbọala ọhụrụ ụlọ ọrụ.
"E nwere ihe ọzọ na-egbochi ntinye nke a ohere karịa ihe ọ bụla ọzọ m maara nke,"Elio-ekwu. "Ọ bụrụ na ị na-naa nke ụka, oge ikpeazụ a kere a ihe ịga nke ọma ụgbọ ala ụlọ ọrụ na America na nke ahụ ka na-agba ọsọ bụ Walter P Chrysler na 1925. "
Back n'oge nlaazu, mgbe "ego mmanụ na-aga site n'elu ụlọ", Elio-ekwu na ọ ghọrọ "were ya iwe ọ na-ahụ akụ na ụba nwusi nke a na obodo".
"M wee sị, Achọrọ m ewu a $5,000 ụgbọ ala na-akawanye 65 kilomita kwa lita,"Ọ na-echeta. "Enweghị m data ndabere na elu. Anyị malitere na-arụ ọrụ nsogbu. M ka na-eche a $5,000 ụgbọ ala gaara a sexy nọmba. Ma, dị ka ije malitere-emepe emepe na anyị malitere nzute na suppliers ma na-ịnye ọnụahịa, anyị ghọtara nke a na-apụghị nwere otutu atụmatụ na ndị mmadụ ga-atụ anya. "
O na-ekwere na akpaaka mkpọsa azụmahịa kwesịrị ịgbanwe n'ihi na-ere ahịa na-adịghị uzo na ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ na ego.
"Echere m na otu n'ime nnukwu nsogbu bụ azụmahịa nlereanya na-agbajikwa,"Na-ekwu Elio, -ekwu na ọ na-rọrọ banyere owning a ụgbọ ala ụlọ ọrụ na aka na ya ebe ọ bụ na ọ dị obere. "The zuo nke a ụgbọ ala bụ ndị dị otú ahụ buru ibu game, nke mere na anyị nwere $6,800 ọnụ ọgụgụ. Ọ bụrụ na ị mara ihe ị chọrọ na e dịghị ego nke, ya agaghị alụ ị ise awa ịzụta a ụgbọ. "
The XTI Aircraft echiche na atụmatụ vetikal takeoff na ọdịda, nke nwere ike akagbu mkpa ọ dị ọdụ ụgbọelu, dị ka nchoputa David Brody. XTI nyere ihe Guardian na ngwaahịa a sụgharịa.
The afọ mgbe Elio malitere ụlọ ọrụ ya, Denver dabeere David Brody na-esetịpụrụ ndị anya ala ụzọ nke ya. Ya mmalite, XTI Aircraft, mepụtara a echiche maka a isii oche-azụmahịa ugboelu nke na-efe dị ka nkịtị njem ugboelu, ma na a ighikota - ọ na-ewe anya na ala ekwesị.
Ụlọ ọrụ ahụ si TriFan 600 ugboelu eji atọ ducted Fans maka vetikal liftoff. Sekọnd mgbe takeoff, abụọ nku Fans r otate-atụ nnofega kehoraizin ụgbọ elu. A ofufe ndokwasa ka fuselage closes. Mgbe ọ na-abịa oge adaa, usoro-arụ si na agbara.
XTI azọrọ na ugbo elu ga-akpa ogologo nso vetikal-takeoff azụmahịa ụgbọelu. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepe emepe vetikal-takeoff technology. na June, Boeing gosiri a nso-vetikal takeoff nke a Dreamliner.
Brody nwetara a icheku ọkụ nke mmụọ nsọ banyere afọ iri gara aga mgbe nwa ya nwoke bụ 10 arọ we me home ihe nke magazin bụ Time. Ọ na-echeta na ọ gụnyere otu isiokwu banyere ihe entrepreneur na-agbalịkwa ịzụlite Obere ugboelu nwere ike gbapụ na ala ekwesị.
"Nke ahụ mere ka m na-eche echiche,"Brody-ekwu. "Ọ bụrụ na ị na-ele ihe mere n'elu ikpeazụ ọtụtụ afọ na okwu nke ọganihu na ihe: anyị nwere Mkpa ọkụ ihe na nwere ịrịba ọganihu na ugboelu engines. Nke a ugboelu nwere ihe abụọ turboshaft engines, gbakwunyere ọganihu na nkà na ụzụ kọmputa ekwewo maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ controllability na nkwụsi ike nke na ugbo elu nakwa dị ka nkukota avoidance. Ụfọdụ n'ime driverless ụgbọala technology ga-eleghị anya na-egwu a ọrụ na ugbo elu nke ga-eme n'ọdịnihu. "
Brody-ekwere na-eme n'ọdịnihu nke agafeghị oke azụmahịa ugbo elu ga-vetikal takeoff na ọdịda. The technology ga-ewepụ ndị na-eri ụlọ ahụ ma na ịnọgide na-enwe ọdụ ụgbọelu na ogologo runways. Ọ na-pụrụ ime ka efe efe ọbụna ndị mmadụ nweta ihe site na-eke ikuku taxi ọrụ na eburu gị adịghị anya site n'ụlọ gị gị na ma ọ bụrụ na ọ bụghị gị n'ihu ọnụ ụzọ.
XCOR Lynx suborbital ugbo ala Aims na-njem na obere njem na nsọtu uwa. The ụlọ ọrụ nyere ndị Guardian na a nkwado video nsụgharị.
Kasịnụ n'ókè maka a njem entrepreneur, n'ezie, bụ nke ụwa a. California dabeere XCOR Aerospace ka malitere ere tiketi maka flights na ya Lynx usoro nke suborbital ugbo ala, nke ga-njem na payloads on a ohere njem ruo 330,000 na ụkwụ na dịruru-erughị otu awa.
Njem ga-nnoo ịbụ co-pilot na njem - nanị ndị ọzọ njem na njem e wezụga pilot. Ya mere, ha ga-enye a "oku na-aga ihe ịrịba ama" na ga-enwe ike ele ohere site Lynx kokpiiti kanopi na-enye ihe irutụrụ ele ohere.
The ụgbọala na kwadoro site na reusable rọketi engines na-agba ọsọ na kerosin na mmiri mmiri oxygen.
"Mgbe isi ihe na ihe anyị na mepụtara na XCOR bụ a n'ụzọ zuru ezu reusable rọketi engine,"Na-ekwu osisi so Michiel Mol. "Nke ahụ pụrụ iyi ikpọ, ma ọ n'ezie bụ. Ndị ọzọ na roket si na e nwere otu oge were naanị. Anyị nwere ihe anyị na-akpọ ntabi reusability. Anyị engine nwere ike ofufe, emetụ ala na-aga n'ihu. "
Ya mere, na Lynx arịa nwere ike, ọ na-ekwu, na-njem nnoo ka ókè-ala nke ohere. XCOR envisions amalite ule flights ndusụk n'oge okpomọkụ ọzọ na itinye ha azụmahịa were isii na 12 ọnwa mgbe na, na azụmahịa flights amalite ikekwe na 2017.
Ụlọ ọrụ emewo rere a narị ole na ole tiketi ama, ukwuu n'ime-ejere ndị nwere ahuhu maka ohere. (Na onye nwere ego na-emefu: tiketi bụ $100,000 kwa ụgbọ elu.)
"Anyị na-ahụ kwa astroloji onye na-anọwo na ohere-abịa azụ ọ rụsịrị nwere na-agbanwe ndụ ahụmahụ,"Mol-ekwu. "Ọ bụrụ na i si n'ebe blackness ohere, -achọ na a obere acha anụnụ anụnụ na mbara ala na a na-egbuke egbuke green-egbukepụ egbukepụ na a obere oyi akwa nke ikuku gburugburu ya, ya anya otú na-adịghị ike si n'èzí. Ọ na-eme gị ukọ maka Earth onwe ya. "
Otu n'ime ndị commonalities na-aghọ ìhè mgbe ndị na-agwa ndị ọchụnta ego dị ka ndị a bụ otú ha na-ele ha ambitions dị ka inevitabilities.
Ha niile – na obi abụọ adịghị ya ndị ọzọ na njem ohere – ele ọnọdụ ghar mgbe ọ na-abịa n'ụzọ anyị na-enweta site na ebe a iji e nwere taa dị ka untenable, na ihe nwere ịgbanwe – na na jetpacks na suborbital arịa dị nnọọ obere nke a ize ndụ nzọ karịa ime ihe ọ bụla ma ọ bụ na-eme obere Tweaks ẹdude echiche.
Mol-ekwu ga-eme n'ọdịnihu nke njem na-agụnyekwa echiche na aghụghọ anyị yiri ike ọbụna atụrụ ime nke taa, n'ihi na mkpa nke tomorrowwill adị otú pụrụ iche.
"Echere m na ihe a kpọrọ mmadụ na-mgbe na-agbalị ịchọta ókè ya na-aga ebe dị anya,"Ka o kwuru. "Echere m na na dị anya ga-eme n'ọdịnihu anyị ga-ebi na otutu mbara ala dị ka a umu. Ekwenyesiri m ike nke na, ee. Eleghị anya ọ bụghị ndụ anyị, ezie. "
30980	0 Andy Dị Nwayọọ n'Obi, Nkeji edemede, akpakanamde ụlọ ọrụ, Business, Environment, Atụmatụ, Technology, na naa, N'ọdịnihu nke njem, Travel na iga, US ozi ọma, World ozi ọma
← Facebook ule Snapchat-style onwe-destructing chat na ozi Olee otú smart akpa ga-akpụzi ikuku njem →